निर्वाचनको तयारी पूरा, ढुक्क भएर मतदान गर्न आग्रह – Etajakhabar
निर्वाचनको तयारी पूरा, ढुक्क भएर मतदान गर्न आग्रह
ललितपुर : जिल्लामा निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको छ । सुरक्षाकर्मी र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी सबै मतदानमा आवश्यक सामग्री लिएर सम्बन्धित स्थलमा पुगिसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले बताएको छ ।
एक सय ३१ मतदानस्थलमा नै कर्मचारी पुगिसकेको कार्यालयका प्रमुख सीता साम्बाले बताउनुभयो । एक मतदान केन्द्रमा १० देखि १२ जना कर्मचारी खटिनेछन् । जिल्लाभरका २७७ मतदान केन्द्रमा तीन हजार एक सय कर्मचारी खटिएका छन् । मतदानमा खटिने कर्मचारीलाई विभिन्न तहका तालीम सञ्चालन भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवकलाई तालीम दिएर कार्यालयले वडापिच्छे खटाइएको छ ।”
जिल्लभरमा दुई लाख २८ हजार तीन सय ३८ मतदाता छन् । जिल्लामा प्रतिनिधिसभामा तीन र प्रदेशसभामा छ क्षेत्र छन् । सबैभन्दा बढी क्षेत्र नं ३ मा ८६ हजार चार सय ३९ र सबैभन्दा कम क्षेत्र नं १ मा ६५ हजार ९१८ मतदाता छन् । क्षेत्र नं २ मा ७५ हजार ९८१ मतदाता छन् । सुरक्षा व्यवस्था मजबुत
बिहीबार हुने दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्लाभरिको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत रहेको प्रजिअ महादेव पन्थीले बताउनुभयो । “विशेषगरी मतदान केन्द्रीकृत सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त पारिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनालगायतको उपस्थिति बलियो छ, भोलि हुने मतदानमा ढुक्कसाथ मत खसाल्न म मतदाताहरुलाई आग्रह गर्छु ।”
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २०, २०७४ समय: १२:०९:४८
विश्वका उत्कृष्ट शिक्षकहरुमा नेपालका विनोद शाही टप ४० मा पर्न सफल, जसले डोल्पामा बसेर गरेका थिए पौरख
बार्सिलोनाका सुपर स्टार लियोनल मेस्सीले अचानक किन देखाए फुटबल खेलबाट सन्यास लिने संकेत ?
क्रिकेट टोली स्वदेश फिर्ता : मैदानकाे माग राखी मन्त्रीकै अगाडि विमानस्थलमा नाराबाजी
विमानस्थलमा नेपाली क्रिकेट खेलाडीको भव्य स्वागत, फोटो फिचर
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेर नेपाली क्रिकेट टोली आज स्वदेश फिर्ता
‘म सेवक हुँ’ भन्ने भावना राखेर कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री
२६ बर्षपछि बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा जहाजको अवतरण, स्थानीयवासी हर्षित
बिदाको दिनमा पनि सरकारी गाडी चढ्दै हुनुहुन्छ ? कारबाहीमा पर्नु होला होसियार
‘हेड इन्जुरी’ कम गर्न दुवैलाई हेल्मेट